Yaa Martin Vrijland? : Martin Vrijland
Yaa Martin Vrijland?
Yaa Martin Vrijland iyo sababta uu isagu iskugu xiran yahay maqaalo qoraal ah?
Qoraallo yar ayaa ii sheegay in warbaahinta kale ee Netherlands ay si buuxda u kantaroolayso. Anigu waxaan u jeedaa '' xakamaynta adeega qarsoodiga ah '. Nederland, kooxda waxaa lagu magacaabaa AIVD. Si aad u xaqiijiso in, xaqiiqdii waa inaad soo dhex gasho. Taasi waxay ku dhowdahay inaan ku guuleysto qorshe, laakiin waxaa jira ficilo fara badan, taasoo iga dhigtay in la iga eryo. Sidaa daraadeed waxa aan si kooban u sharxi doonaa taariikhda astaamaha ah ee qoraaga, waxaanay tilmaameysaa meelaha aad ka akhrisan kartid haddii aad ku raacsan tahay xukunkayga ama haddii kale.
Markii aan bilaabay qoritaanka 2012, ma aanan dooneynin inaan taas sameeyo weligiis. Shaqaalahaygii u dambeeyay ee aan ka shaqeynayay maareeyaha iibka caalamiga ah wuu xumaaday iyo intii aan shaqadaas ka dib qabtay, si lama filaan ah calooshaydu waxay u buuxsantay 'dhar ku habboon oo aan kiraystay baabuurta'. Waxaan go aansaday inaan waxyar qoro (waxaan u maleeyay 'si ku meelgaar ah') waxaanan doortay halyeeyga in uusan dhaawaceyn CV-ga. Markaa waxaan u oggolaaday in laygu eryo wada tashi wanaagsan, si aan uhelo xaquuqda dheefaha. Qoraalkaas wuxuu ku bilaabmay maqaal ku yaal bogga (hadda la kansalay) bogga Argusoog ee Arend Zeevat wuxuuna ku dhammaaday boggeyga gaarka ah. Dhowr bilood ka dib, goobtaas si lama filaan ah ayaa loo booqday illaa 150 kun jeer maalintii maalintii dacwadda Anass Aouragh. Tani waxay sabab u ahayd waxaan go aansaday inaan aado 'goob falka' oo aan ku haysto kamarad, waayo Peter R. de Vries ayaa telefishanka ka sheegay. timo kasta iyo fiber kasta waxaa lagu baari doonaa kiiskan dilka ah (self). Waxaan jeclaan lahaa haddii ay taasi dhab ahaantii ahayd kiiska oo ay ku qaadatay kamarad hiwaayad ah goobta. Halkaas waxaan ka helay qashin badan oo ah meeshii Anass laga heli lahaa oo markhaatiyaal ay sheegeen in ay ka soo tageen eey ayaase isla subaxdii. Xaaladdan ayaa markaas ka shaqeysay Nederland oo idil, waxaanan sidoo kale daabacay warbixinta naafaynta NFI. Taasi waxay ku soo noqotay warka weyn, sababtoo ah qofna horay ayuu u sii waday, laakiin magaceyga lama sheegin (taasi waxay siineysaa xittaa martida inteeda badan).
Ku dhowaad markiiba markii aan galay ganacsigaas, waxaa la igu soo weeraray dhammaan noocyada kala duwan ee internetka iyo been abuurka ah iyo inkasta oo uu jiro cadeyn aad u balaadhan oo aad u faahfaahsan, waxba waxba lagama qaban tan ilaa maanta. Intaa waxaa dheer, ma jirto qareen aan ku dhicin in ay gubaan nidaam marka aan sharxo in la xaqiijin karo in ololahan ka yimaado dhinaca dawladda. Sidoo kale wax jawaab ah kama helin qareenka isbahaysiga ah ee Sven Hulleman.
Warbaahinta kale ayaa ku kacday maalmahaas, waxaanan ka badnayn ama ka yaraa goobaha iyo dadka aanan maqlin ama aan maqlin ka hor inta aanan bilaabin qoraaga. Micha Kat waxay ahayd mid ka mid ah. Waxaa sidoo kale la igu casuumey 'Symierium Frontier' iyo xitaa loo magacaabay abaalmarinta 'Frontier Award'. Kadib waxyaabaha ugu horreeya waxay bilaabeen inay istaagaan. Sidaa ayaan ku wareysan lahaa John Consemulder, laakiin si lama filaan ah oo aan dib dambe u socon karin. Hawlgalkeyga waa la duubay, laakiin aan meelna u baahin. Marcel Messing (magaca saxda ah ee warbaahinta kale) ayaa i soo qabsaday qol ka dib markii bandhigga xiran ee qaar kaleba. Halkan waxa uu ii sheegay inaan gaar u leeyahay in aan si aad ah u taxaddaro. "Waxay" iigu bartilmaameedsan karaan hubka tamarta lagu hago.
Dadkii aan ka qaybgalay warbaahinta kale ayaa iyaguna si weyn uga soo horjeeday daraasiin goobood oo u muuqda in ay ka soo jeedaan dhulka gaar ahaan qareemada iyo qarsoodiga cinwaankayga. Anigu waxaan ogaaday in xoogagga ka dambeeya jahawareerkan iyo aflagaadada uu yahay shaqaale dawladeed (iyo wadaadka OTO) Jeroen Hoogeweij wuxuu ahaa, kii xilligaas macno ahaan ku noolaa geeska geeska ah ee Micha Kat. Si kastaba ha ahaatee, waxaan soo dhaweeyay Micha Kat. Kat ayaa ahaa tan iyo markii magaca weyn ee warbaahinta kale, sababtoo ah wuxuu la dagaalamayay dhowr sano oo ka dhan ah pedophilia ee ninka ugu sareeya caddaaladda: Joris Demmink. Kat ayaa igu martiqaaday inaan u imaado hababka Demmink ee aasaaska loo yaqaan "Rustig Spijker" aasaasiga ah waxayna bixisay shidaalkayga. Waqtigan oo dhan Kat ayaa u muuqday inuu awood u leeyahay inuu tuuro lacag sida haddii aysan waxba ahayn, sidaas darteed soo jiidashada dareenka. Inta lagu jiro kalfadhiyada waxaan ogaaday in xubnaha aasaasiga ah ee Demmink ku eedeeyeen in ay ahaadaan kuwo ka soo horjeeda oo iga baqaya. Taasina waxay igu kicisay xiisadayda. Maxay sababta ay si aad ah iigu jawaabeen? Waxaan joogaa xeradooda mar kasta? Markii aan arkay ribbada casaan ee mulkiilaha xubin ka mid ah aasaaska, waxaan la yaabay sida xubin ka mid ah aasaaska oo ka badan ama ka yar ku soo weeraray gobolka Nederlandka inay xirto xariijin jilicsan. Sidaa darteed waxaan u tegey inaan qodo taariikhda dadka aasaasiga ah. Tusaale ahaan, waxaan ku soo bartay xaqiiqda ah in sidan oo kale ah (magaca Ben Ottens) ay gacan ka geysteen kor u qaadista qiimaha dhulka ee ku xeeran Schiphol oo laga isticmaalo beeraha si loo dhiso dhulka. Qoyska Poot, oo maalgeliyay aasaaska Rustigo Spijker, ayaa sidaas awgeed dalban kara balaayiin ka mid ah dawladda Nederlandka ee dhulalkaas (oo ay ku jiraan mashaariicda horumarinta khiyaaliga ah). Waxa kale oo aan ogaaday in aasaaska uu wada shaqeynayay Jack Abramoff, oo ah nin ka soo jeeda 'sare-sare' ee Mareykanka oo leh filimaan galmo ah. Sidaas awgeed si kama 'ah ayaan u ogaanay in Kat ayaa waxaa maalgeliyey qoyska Poot oo waxay u muuqatay inay khiyaano weyn ku noqotay. Dacwad ka dhan ah Demmink sidaas darteed ma soo laabanin ku saabsan xaqiiqda dhabta ah ee xadgudubyada asaasiga ah, laakiin sida muuqata wax badan oo ku saabsan lacag baad ah ee gobolka Dutch.
All websites in warbaahinta kale, si kastaba ha ahaatee, u muuqday mar xadgudubyada ku xeeran (ilaa haatan) ay geesiga Miikaa Kat, ma doonayaan in ay la kulmaan. Xitaa waxaan ku casuumay raadiyaha raadiyaha oo aan faahfaahin karo waxa aan helay. Waxaa la sheegay i in tani waxay noqon lahayd 1 1 ah inay wareystaan, laakiin inta lagu jiro baahinta nool ayaa waxaa si lama filaan ah ku dhawaaqday in Miikaa Kat ayaa sidoo kale wuxuu ahaa ee show ah. Taasi waxay ahayd hab casri ah, laakiin warbaahinta ee Kat yar wanaag sameeyey, maxaa yeelay, waxaan uun u suurtagashay in ay garta in uu bixiyo by qoyska Paw iyo runtii shaqeeyay Jack Abramoff. Warbaahinta kale oo dhan ayaa tan iyo intii iiga iska dhego tiray sida pariah. Waxay ku wada qaaday ii in this weeraro opprobrious iyo aflagaaddada oo dhan (marka laga reebo site Niburu.co iyo Miikaa Kat ayaa Whistleblower Online) ahaayeen ama aan loo gayn si dhib leh ku xidha articles aan, laakiin waxa ay haatan u lahaa in aynu diiddanyahay ii weeraray iyo xitaa weerarrada sababtoo ah soo-gaadhis aan ka soo helay Micha Kat.
Ka hor intaan oo dhan tan dhaceen, mar hore ayaan ku martiqaaday Marcel Messing kulan noocaas ah oo ay ku biiri lahaayeen ciidamada warbaahinta kale ee koonfurta dalka. Halkaas ayaan halkaas ku helay taageero sababtoo ah waxaa la igu deeqay in aan bixiyo kharashka shidaalka. Waxay cadeeyeen in faa'idada WWF ay ahayd ganacsi hoos u dhacaya. Anigu hadaan sii wadi karno wakhtigaas, wakhtigaana gurigeyga ayaa hore loo masaafuriyay si loogu qasbo in uu ku noolaado kufsi. Taasi waa sababta aan dib ugu soo celiyay saacadaha 4,5 iyo saacadaha 4,5 ee shidaalka duqoobay oo baabuuraya. Intii lagu guda jiray kulanka boggaga warbaahinta kale, halkaas oo ah ficil kasta oo magac iyo magacba ku dhex yaal warbaahinta kale (Marcel Messing, Ad Broere, Guido Jonkers, iwm.), Ayaa la sameeyey wada-shaqeyn. Waxaa jirey in ay noqoto kan wadajir ah ee warbaahinta kale. Marcel Messing ayaa tilmaamay in uu ogaa dadka doonaya in ay malaayiin diyaar u noqdaan. Waxaan ogaadey in fiirin cajiib ah oo ay soo saartay su'aasha ah cidda ay "dadku" noqon lahaayeen. Marnaba ma ogaanin, sababtoo ah joogitaankeyga ayaa hal mar ah. Waxaan si cad u noqday hanjabaad ka dib markii lagu soo bandhigay Micha Kat.
Iliga ayaa leh
Maaddaama 2014 aan si lama filaan ah u arkeen magac cusub oo muuqda goobta muuqata. Qof dumar ah oo la odhan jiray Irma Schiffer si lama filaan ah u muuqday qor articles ku saabsan mawduucyo aan caddeeyey in ayna u muuqatay sida haddii ay jirto ahayd in la bilaabay kale Martijn Vrijland ee foomka of this Irma Schiffer. Gabadhan ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay dhammaan goobaha la yaqaan ee warbaahinta kale. Waxaan sidoo kale arkay muuqan on goobta wariye jir ah loo magacaabay Judy Monshouwer kuwaas oo sameeyey wax la mid ah waxa lagu samayn lahaa, ka hor inta weriyaha Jarmal Udo Ulfkotte. Ulfkotte 17 sano shaqeeyay Allgemeine Frankfurter ku Zeitung, Frankfurter Allgemeine 'ama' FAZ 'oo soo baxay buug taas oo uu ku andacooday in ay CIA mararka laaluushay suxufiyiinta. Netherlands oonan halkan joogi karo, sidaas darteed waxaan helay noo gaar ah 'Udo Ulfkotte' oo ah qaab wax Sadaqaysta oo lagu kalsoonaan karo raadinaya Janneke Monshouwer. Waxay ku wacdisay in ka badan ama ka yar oo isku mid ah oo ku saabsan saxafiyiinta Holland. Kooxda 'WantToKnow, Earth Matters', iyo goobo kale oo badan oo si xamaasad leh u dallacsiiyay magacyo cusub. Taasina waxay ahayd sida uu ujirta wiilka u dhashay Holland inuu doonayo inuu maqlo.
Waxaan sidoo kale si lama filaan ah u aragnay soo bixitaanka nooc kasta oo magacyo cusub ah, sida Martijn van Staveren, Willem Felderhof iyo Coen Vermeeren. Dhammaan dadka ku lugta leh aagga hoose ee "aragtiyada shirqoolka" ama ruuxi ahaaneed. Waxay si lama filaan ah u kacay Baxa dhulka ayna u muuqatay in, tan iyo markii aan muddo aad u firfircoon ee 2013, ayaa si lama filaan ah u noqdaan weyn u qaaddey in ay qabsadaan baraaruga ee dadka dalka Netherlands. Ma aha rabitaankayga inaan ka wadahadlo oo aan buuxiyo dhamaan magacahan 1 ee 1, sababtoo ah waxaad ku ogaan kartaa naftaada ama aan la isku hallayn karin. Waxaan kaliya oo aan sharaxayaa aragtidayda. Martijn van Staveren Hore ayaan hal mar uga hadlay; Willem Felderhof ayaa si lama filaan ah u ahaa xoogga ka dambeeya taxanaha shirka oo la yiraahdo 'Open Mind' iyo Coen Vermeeren oo ku takhasustay Ufo iyo 911.
Magacyada dhammaantood waa kuwo iska caadi ah waa miisaankooda degdega ah iyo miisaaniyadooda aan xadidnayn, fursadaha iyo 'dareemaan muuqaal wanaagsan' iyo dhiirrigelintooda wax kasta iyo qof kasta oo ku nool dalalka kale ee warbaahinta. Dabcan waad samayn kartaa, waadna u tixgelin kartaa sida wanaagsan iyo waqti isku mid ah oo aad ka fiirsan kartid cadho, masayr, jaahwareer ama 'gooni isdaba-marin' ee Martin Vrijland. Midkoodna maahan. halkii Waxaan jeclaan lahaa view ka soo horjeeda u yimaadeen inay si fiican u wada shaqeeyaan la-doonka runta, si ay xoogga saaraan qoraal ah oo ku saabsan aragtida aniga ii gaar ah oo ku saabsan news iyo hadda arrimaha, laakiin maxaa yeelay, waxaan ogaaday in maadooyinka macno afduubay oo waxaa inta badan ku xiran desinfo ama jidad been ah, Waxaan dareensanahay in la iigu yeero digniin cad. Waxaan sidoo kale xusuusinayaa xaqiiqda ah in dhammaan website-yada warbaahinta kale ay iigu diideen marka (oo ka soo horjeeda waqtigan) waxaan soo bandhigay been-abuuriye Micha Kat. Taasi waa inay sameeyaan giraangir giraan.
Dhammaan waxyeelooyinka cusub ee caanaha ayaa sidoo kale leh mid caadi ah waa in aanay u muuqan inay saameyn ku yeelan karaan farriinta 'aragtiyada shirqoolada'. Haddii ay muhiim tahay? Waa ugu yaraan cajiib ah in la sheego in tani ay dhacday kiiskeyga. Taasi kuma dhicin xatooyo iyo been abuur ah oo ku saabsan khiyaamo, xabsi, weerar iyo waxyaabo kale, laakiin xitaa waxay u baxday faahfaahin kasta oo ku saabsan gabadheyda oo ay ku jiraan da ', booska iyo iskuulka. Laakiin taasi si buuxda uma muuqato, mana aysan magacaabin dhammaan goobaha warbaahinta ee kale. Haa, waxaa laga yaabaa in lagugu leeyahay naftaada, fikradduna waxay noqon kartaa, laakiin xaqiiqda ah in shayada la abuuray iyo cadeymaha maaha arrin; xaqiiqda ah in tan la caddeeyey inuu ka yimaado shooladda shaqaale dawladeed; xaqiiqda ah in weerarrada noocan oo kale ah ay ka maqan yihiin kuwa kale ee cusub; In lagu daro xaqiiqda ah inay kor u qaadaan oo ay taageeraan midba midka kale, waa inay soo qaadaan su'aalo. Miyay noqon kartaa in dhammaantood la tababaray oo ay bilaabeen AIVD? Mise taasi waa fikrad shirqool?
Sug hal daqiiqo. Sidaa daraadeed waxaan rumaysan karnaa in dawladu ay adeegsadaan calanka been abuurka ah iyo dacaayad iyo isticmaalaan warbaahinta caadiga ah, laakiin ma rumaysan karno in adeega sirta ah uu leeyahay warbaahinta kale ee jeebkeeda? Maxaad u dooneysaa mid dhaqdhaqaaqa halista ah joogteynin? Vladimir Lenin horeyba u sheegay in sida ugu wanaagsan ee loo xakameyn karo iska-caabbintu waa in la siiyo hoggaaminta mucaaradka. Mise taasi waa wax uun oo lagu dabaqay middii hore ee Midowga Soofiyeeti? Ma noqon kartaa in hubka loo yaqaan 'AIVD' ee loo yaqaan 'croatopus' ee ku yaala Nederland in laga yaabo inuu ka yaryahay hanti badan oo dad badani ka fikiraan? Miyay taasi noqon kartaa Godfather Marcel Messing, oo ka soo jeeda qowmiyado sarre oo aan la ogeyn munaasabadda, waa aasaasaha mabaadii'da Nederlandka? Si aad u qabato mucaarad wanaagsan, waa inaad dadka siisaa waxa ay raadinayaan '' runta '.
Waa maxay runta?
Dhibaatadaada dhabta ah, dhibku wuxuu yahay inaad ugu yaraan dareemaysid dareen 'in codkani runtii yahay mid la aqbali karo'. Kadibna waxaad la xiriirtaa daqiiqadda eureka halkaas oo qof kastaa uu raadinayo jahwareer ku saabsan warbaahinta caadiga ah iyo dacaayad cad oo iyo (inta badan) been. Waxay u muuqataa in baahidan loo galay qalab sare tan iyo 2014. Irma Schiffers, tusaale ahaan, waxay aad ugu mashquulsan tahay. Waxaa jira waxkasta oo ku jira warbaahinta kale. Ma waxaad aamminsan tahay in dhulku uu yahay guri? Markaas waxaad heli doontaa taas. Waxay aaminsanyihiin shisheeyaha ama UFOs, waxaad aadi kartaa jihooyin kala duwan, xitaa waxaad ka heli kartaa "xoojin" xagga ruuxa sida Martijn van Staveren. Miyaad aaminsan tahay in caruurtu si qumman u laayeen? Markaas waxaad sidoo kale ka heli kartaa dhawaan oo ay la socoto "bangiga hore iyo kan hoose" Ronald Bernard. Dabcan waxaa jira mowduucyada ay qof walba dhagxaan dhagahooda ku saabsan hadda: 911, tallaalada iyo chemtrails. Waxaa laguu adeegi doonaa at WantToKnow, Earth Matters, Ninefornews iyo wixii la mid ah. Waxaan ku dhawaad ​​ugu yeeri karnaa 'kaniisadaha kale ee warbaahinta' iyo kan kaniisadan dabiiciga ah u baahan yahay wasiirada aan khasaare ahayn. Pastors oo leh asal wanaagsan, aqoon fiican iyo sheeko dhiirigelin leh. Kuwa sidoo kale ku dhicin inuu u soo yeedho in dhulka ma aha guri iyo in a "howlgalka calanka been ah" mararka qaarkood laga yaabaa in been ah ama qofka soo wacaya aad waxaa la ciyaaray wacyigaliyo TV zoal bulshada Maraykanka abid soo ciyaaray, aadan rabin in ay kaniisad.
Waxay ku saabsan tahay rabitaankaaga inaad raadiso runta. Ujeeddadani waa caddaalad cad oo ka dhalatay awooda badan ee fara-galinta iyo khiyaanada warbaahinta guud. Laakiin si aad u ogaato runta, waa inaadan baran inaad isticmaasho maskaxdaada. Waa inaad barataa in aad si fiican ugu heli karto kaniisad adag oo lagu kalsoonaan karo: kaniisadda warbaahinta kale. Sidan ayaad mar kale baran doontaa in aad ku kalsoon tahay wasiirka, sida wadaadku ku wacdiyay runta mugdiga ee kaniisadaha. Sidan ayaad mar kale kuugu kalsoonaan doontaa wasiirada cusub ee warbaahinta kale. Taasina waa sababta ay muhiim u tahay in aad ogtahay in aad la macaamilayso wadaaddo lagu kalsoon yahay oo kugula jira runta saxda ah sababtoo ah waxay baaritaan ku sameeyeen. Ka dibna uma baahnid inaad wax sameyso. Wakhti looma hayo taas oo ah wadaadkuna waxa uu darsay. Waa hagaag, taasi waxay ku saabsan tahay farriinta Coöperatie Vrije Media; Hawlgalkan oo sida muuqata lagu bilaabay Ad Broere iyo Irma Schiffers, laakiin dhab ahaantii waxay ka timaaddaa shaashadda warbaahin kale oo ka wada shaqeynayay goobahaas. Waa qorshe horay looga wada hadlay mudadii hal mar aheyd ee aan la kulmay kulanka Marcel Messing.
Maxay ahayd taatikada sanadihii la soo dhaafay? Marka ay ka leexatay in takhalusaya cilmi rabin Martin Vrijland iyada oo dhaleecayn iyo qadaf online, ma keento "quusan", oo waxay ahaayeen kun oo akhristayaasha maalin kasta si lama filaan ah ka hor la fikradaha cusub kuwa qoraa aan la rabin. Daadadkaasi waa in la xiraa oo la xiro duufaanta, garoonka ciyaarta si buuxda ayaa loogu qorsheeyay geedo. Meelo badan oo geedo ah oo dhammaantood koraayo, dhammaantoodna waxay lahaayeen wax xiiso leh oo ku saabsan mawduucyada la soo sheegay, laakiin had iyo jeer way ka duwan yihiin. Kalluunka shabakadaha internetka ee warbaahinta kale ayaa la sameeyay. kaynta Taasi waxay ahayd wakhtigaas oo dhan mar hore ay gacanta ku AIVD iyo ee TT shaqeeyay kuwa goobaha horeba si fiican u wada isku duba xiriiriyayaal sida naxaas Marcel iyo Guido Jonkers, laakiin waxaa indhaha lahaa oo duurka ku muuqaal ah sida sii kordheysa aan caddayn en Macluumaad intaas ka badan. Adigu ma aragtay kaynta geedaha mar dambe! Taasina waxay ahayd ujeedada. Tada! Isla markiiba waxaa jira dhowr nooc oo lagu kalsoon yahay oo ah aabaha iyo hooyada (kuwaas oo horeyba uga yimid qashin isku mid ah). Dhaqaaleyahan la isku halayn karo Ad Broere iyo Irma Schiffers. Miyuu ku siinayaa wax aad u sareeya 'content of good'? Dabcan waxaan haysanaa Arjantine Bosch ee Arimaha Bulshada oo dabcan jecel inay gacan ka geystaan ​​sidii loo xiri lahaa dhamaan kaniisadaha yar yar ee kaniisadda weyn ee 1. Waxaa laga yaabaa inaad maleyn karto ciddii magacaaba wasiirrada. Oo miyaad jeclaan lahayd inaad noqotid xubin ka mid kaniisadan? Kaniisaddu waxay u baahan tahay lacag si ay u fuliso dhammaan qorshayaasheeda wanaagsan. In ay jirto lacag ka danbeeya muuqaalada (sida Marcel Messing oo si khaas ah u tilmaamaya joogitaanka joogitaanka inta lagu jiro kulanka) uma baahnid inaad ogaato. Kaniisada Kaatooliga ayaa sidoo kale leh lacag, laakiin adigoo xubin ka noqda waxaad xaqiijinaysaa rumaysadkiina, adigana aad naftaada u gashay kaniisadda. Waa inaad sidoo kale sameysaa kaniisadan cusub ee De Vrije Media. Waxay raadin doonaan runta kuu ah. Dhamaantood, waxay hadda yihiin "xaqiijin la isku halleyn karo". Ah, iyo haddaad xubin ka tahay kaniisadan la aamini karo, mar dambe uma baahnid inaad taageerto sida Martin Vrijland, oo aan xitaa helin waxtarka kaalmada bulshada. Ka dib, waxaad horeyba ugu biirtay koox naadi ah oo isdifaaceysa. Ku soo dhowow kaniisad cusub. Hawlgalka ayaa la qabtay. (Ka sii akhri wax dheeraad ah fiidiyowga)
Waxaa laguugu adeegayaa
Laga bilaabo hadda adiga ayaa lagugu siin karaa "xaqiiqda dhabta ah" ee De Vrije Media. Tani waa sida AIVD ugu horeysay u abuuray kaynta, waana sida ay hadda u bilaabi lahayd xalka. 'Habka ugu wanaagsan ee lagu xakamayn karo mucaaradka waa inaad adigu hogaamiso'. Laakiin sidee baad ku ogaan kartaa in AIVD ay ka dambeyso? Sidee ku ogaaneysaa in la hubiyey? Qaado sharuudaha bangiga hore Ronald Bernard! Yaa runta ka hadlaya? Haa, dabcan! Sidii aan idhi, waxaad raadineysaa runta oo waxaa laguugu adeegayaa runta. Inkasta oo 'run' yihiin dabcan fikrad qaran. Ma ogtahay haddii aad aragto runta marka aad ku jirto doonid saaran xeebta xeebta? In aad haysato biyo ku xeeran, ka eeg dhinaca xeebta fog oo aad ku hareereysid rakaabkii aad la shaqaynaysay; taas oo ah xaqiiqda aan la goyn karin. Waxa aanad arki karin waxa ka dhacaya xeebta. Markabka ayaa gacanta ku haya xeebta.
Muujinta hoos ku xusan ma aha inaad si dhow u eegto si aad u aragto khadadka isgoysyada. Marmarna waxaad aragtaa caarada. Laakiin sidoo kale ma arki kartaa dhammaan dhibcooyinka hal mar?
In image kale (fiiri hoos) aad si cad u arki kartaa sawirka oo madow iyo caddaan, laakiin haddii aad eegto wax yar ka dheer seconds 10 (indhahaaga diiradda on the dhibco 4), ka dibna soo noqnoda indhahaaga iyo wax kasta oo u muuqda mid kor biligleynaya, waxaad arki doontaa "dabeecad aad u yaqaan". Waxaad arki doontaa muuqaal qarsoon. Tani sidan ayaad u aragtaa runtii runta. Haddii aad u maleyneyso in aad aragto wax sax ah, waxaad weli u muuqataa inaad ka maqnaato dhibco yar ama sawirka muuqda sawir qoto dheer. Maxaa dhacaya haddii warbaahinta guud ay ku siiso 'madow' ee sawirka hoose iyo warbaahinta kale ee aad 'caddaan'? Maxaa soo baxaya? Wali ma arki kartid sawirka qarsoon. Iyo, in feker ahaan, waa dhab ah ujeedadu.
Ereyga 'shaqaale fudud' waa erey la jecel yahay ee warbaahinta kale. Taasi 'iftiin' iftiinka mugdiga. Ama sida Ronald Bernard filimkan wuxuu u fasiraa si qurux badan marka uu yiraahdo koox dad ah ayaa fadhiya mugdiga muddo wakhti ah waana in ay u adeegsadaan mugdiga. Ka dibna nalalka guud waa iftiin leh, qof kastana waxaa ka buuxa iftiinka. Codad xiiso leh, laakiin iftiinkani wuxuu u jeedaa iftiinka Luciferian. Waxaan ku soo laaban doonaa waqti dambe. Su'aashaada waa inaad isweydiisaa: Haddii warbaahinta kale ay ka dhigan tahay 'caddaanka' (iftiinka) sawirka madow ee warbaahinta guud, miyaad aragtaa runta ama hooska runta ah?
Waxaad rabtaa cadeyn aad u adag in warbaahinta kale ay sameeyeen AIVD. Waxay yihiin bayaano aad u badan oo aan sameeyo, markaa waan ku fahmayaa. Waxay la mid tahay sawirka kore; Waxay ku tusinaysaa madow iyo caddaan, laakiin si aad u aragto sawirka qarsoon, waa inaad kuxatirto dhibcaha XNUM-ka muddo ka dheer, ka dibna indhahaaga u fiirso oo fiirso waxa aad aragto. Waxaan ku tusi karaa oo keliya tusaalooyinka sawirka la arki karo. Waxaad mararka qaarkood ka sheegi kartaa meelaha ay dadku ku dhaqmaan iyo in sheekooyinka u muuqdaan inay 'caddaan' ku yihiin sawirka madow, laakiin waxay u egtahay maskaxda qarsoon. Si aad u aragto sawirka qarsoon ee muuqaalka muuqaalka, kaliya indhahaaga indhaha.
Sheekada dhabta ah ee Ronald Bernard wuxuu ku jiraa tusaale ahaan tusaale wanaagsan. Ronald wuxuu kuu sheegayaa wax kasta oo u muuqda inuu yahay mid sax ah. Waxa uu kuu sheegayaa sida bangiga adduunku u shaqeeyo, xittaa wuxuu sharxayaa in siyaasiyiinta ay yihiin wiilasha wiilasha nidaamka bangiga; nidaamka bangiga ee sare ee Ahraamta. Halka kore ee haramigu yahay BIS BIS; hoosta bangiyada dhexe iyo hoosta bangiyada caadiga ah. Waxa uu sharxayaa sawirka dahabiga ah ee loo yaqaan 'pyramid picture' in qof kasta oo firfircooni u ahaa muddo yar uu ogaa warbaahinta kale. Ronald u muuqda inuu farta u saaro dhammaan dhibco xanuun! Irma Schiffer isaga waraystay iyo dhamaadka Part 2 of taxane waraysiga (taasoo qaadataa tirada jooggo nidaamsan daqiiqo 33) Ronald ayaa kulanka jooggo mar kale soo jiitay qof inuu la hadlo dhicin inaan ka dhaansado uu story galay shaki mar daran iyo cadhooday . Tani waxay u badan tahay in loo gudbiyo warbaahinta kale ee kontoroolka ah ee la xariira Micha Kat, kuwaas oo u duulay CV Bernard. Anigu ma aan qorin Ronald xilliga soo-saarka filimkan.
Anigu waxaan ku foori lahaa hababka NLP ee warbaahinta guud ka hor, laakiin Ronald Bernard ayaa sidoo kale u adeegsanaya waqti buuxa. Gaar ahaan dhaqdhaqaaqyada gacanta ee daqiiqadaha ugu dambeeya ee fiidiyowga hoos ku yaal waxay bixiyaan calaamado cad. Faafinta gacmahu waxay siinaysaa farriin fara badan oo "I am weyn" (oo aad yar tahay); qalabka is-xakameynaya ee is-xakamaynta oo ka xanaaqaya xanaaq illaa dareenka ugu dambeyntii la jeexjeexay; Faraha farta ku yiraahda codka xanaaqa iyo luuqad jirka ah 'qabashada waffle'. Ronald wuxuu siinayaa farriinta miyir-qabka ah ee "Anigu waxaan awood u leeyahay" qaabka lebiska, dhaqdhaqaaqyada gacanta iyo hadal ahaan. Dhammaan wareysiga ayaa la isku daraa "runta aan la isku hallayn karin" iyo Irma waxay inta badan leedahay hawsha loo yaqaan 'haa' iyo 'sax', si aad maskaxdaada u ilaaliso habka korsashada. (Ka sii akhri wax dheeraad ah fiidiyowga)
In aan qodobka koowaad Ku saabsan Ronald Bernard Waxaan sharxay sida ay u caddahay in uu akhriyo inuu yahay actor. Irma Schiffers ayaa sidoo kale u muuqata in ay adeegsanayso habka 'mucjisooyinka' ee mucaaradka ee Derren Brown (eeg filimkan) ayaa la tababaray. Dabcan sheekadeeda sidoo kale waa mid aad u fiican. Waxay tahay farshaxan, waxay leedahay HSP iyo .. si fiican ayaad u akhrin kartaa waxa ay is leedahay nafteeda [quote]
Dhashay (in badan oo burburay) on 3 Febraayo 1962 meel Hilversum ah; Dabiibaha Jungiyaanka; runta raadiyaha; Tababaraha; muraayada; Aad u qoondeeyay dadka, xayawaanka iyo dabeecada; xasaasiyad iyo xasaasiyadeed oo la xidhiidha been-abuurka iyo musuq-maasuqa, rinji-madow; (horey) bassiste; haa sidoo kale HSP; bulshad wanaagga; dareenka jilidda, ruuxa iyo dhulka (dhammaan-in-one!) iyo biyahu ku yareeyaan muraayadda indhaha; Waan u baxaa xorriyadda, madaxbannaanida, sinnaanta, caddaaladda, daahfurnaanta iyo daacadnimada. Marar badan ayaa la turjumayaa kuwa kale sida aan la dabooli karin, xagjirnimo iyo khiyaano ".
Halkaan waxaan leenahay ereyga 'fududeeyaha' mar labaad, taas oo aad ku soo badin lahayd warbaahinta kale. Ma xusuusataa nuurka iftiinka? kuwaas oo midabada madow ku sawiran? Dabcan, Irma waa mid aad u nugul HSP-ga. Taasi waa wax fiican, sababtoo ah arrintaan (ma aha iyada oo taageero ka heleysa AIVD) waxay si lama filaan ah u garaneysaa sida looga wada hadlo dhammaan shirqoolada ilaa 2014. Laakiin taasi maaha wax kaliya! Irma waa dhexdhexaad. Waa hagaag, markaa waad ku fiican tahay Irma! Waxay dareemo kaliya ama wax waa sax oo waxay ku dhajisaa cadaanka maro madow.
Hadda waxaa laga yaabaa inaad u maleyneyso inaan waco oo aan la iman caddayn. Ma aragtay waxa aad ku arki kartid sawirka madow iyo kan cad? Waxaan sharxayaa wareegyada. Waa inaad sameysaa dadaal aad ku aragto oo aanad cidna arkin. Caddeynta mararka qaarkood waxay ku taalaa calaamadaha iyo farriimaha qarsoodiga ah.
Calaamado qarsoodi ah
Ilaa dhowaan, farriintan qarsooni ma ahan mid si cad loo arki karo, laakiin waa la muujin doonaa. Dhibaatada kaliya ayaa ah in aadan si fudud u arki karin. Waxaad hore u tahay sidaas waxaa laga yaabaa in kaniisadda iyo bixiyo oo dhan Abaal Marintooda Sugan iyo Cooperative Free Media ama aad dherjinta € 100 hore u bixisay in B farxadda leh (oo laftiisa soo wici kartaa weli bangi lahayn). Ma aadin doontid in aad weerarto kaniisad si cad u iftiimisay mugdiga? Waa hagaag, markaa indhahaaga waad xiran kartaa calaamadda.
Tusaale ahaan, akhristaha wuxuu soo saaray qodobada ku saabsan Joy B (ank) ee Ronald Bernard [quote]
Waxaan aragnay arrintan muddo dheer bogga guriga ee bangiga ku faraxsan. Waxyaabaha ugu horeeya ee aad ogtahay waa dabcan calaamadda orange-ka oo ka dhigan calaamadda rasmiga ah ee waqtigeeda. Si toos ah u xigta waa sheyga "bangigaaga dhismaha."
Iyo faallooyin kale ayaa sheegay in soo socda [quote]:
Baanka De Blije Bank ayaa la socda. Miyaad xasuusan kartaa sawirrada qaybta Rothschilds oo ay ku jiraan sawiro? Kaarka casuumada waxaa lagu qoray qoraal arag halkan.
Muraayaddu dhab ahaantii waa calaamad muhiim u ah farsamooyinka Aleister Crowley (Luciferian) ee 'farsamada' iyo 'farsamooyinka kale'. Muraayaddu waxay muujinaysaa, sida ay ahayd, inaad tahay Luciferian. 'D' ee 'logo' ee b "B" wuxuu 'b' ku sawiraa muraayadda. Intaa waxaa dheer, labadan xarfaha ee midba midka kale waxay dhab ahaantii siinayaan calaamada calaamadda ah (taas oo ereyga 'aasaasida' ee 'shuruudaha' bangiga ku jira dhismaha 'sublimin ahaan loola jeedo ereyga "phallus erection"). Sidaa daraadeed waa calaamadda Luciferian. Laakiin si fiican, ha aynaan ku adkeyn oo kaliya fiiri astaanta unugga aasaasiga ah ee dadka. Uma baahnid inaad si fiican u eegto si aad u garatid muuska? Taageerayaasha iyo taageerayaasha Lucifer oo ah taageerayaasha 'Waxaan nahay dhamaanteed', 'Hal Dawlad Dunida' iyo 'Diinta Islaamka ah' marwalba waxay muujiyaan Luciferianism sababtoo ah waxay aaminsan yihiin in tani ay ixtiraamayso sharciga xorta ah. Waxay sidoo kale jecel yihiin inay muujiyaan runta, sidaa darteed sawirka oo dhan waa midab. Waxay sameeyaan caddaan ku saabsan asalka madow, laakiin waxaad arkaysaa muuqaalka sawirka qarsoon.
Dadku waxay doonayaan inay midoobaan dhammaan dadka. Miyuu codkaasi u yahay Luciferian? Dabcan waxaad tixgelin kartaa muusiga ku jira calaamada sida aan waxba galabsan. Miyaad aqoonsan tahay gacantaada 666 by Arjan Bos oo ka socda Dunida Arimaha leh mid ka mid ah heesaha YouTube? Wacdiyeyaasha kaniisada kale ee warbaahinta ayaa jecel inay ku tusaan xerada ay yihiin, laakiin qarsoodi ah. Miyaad muraayada muraayadda ku aragtaa fiidiyaha hoose ee ka danbeeya Irma Schiffers? (Ka sii akhri wax dheeraad ah fiidiyowga)
Jawaab-celiyahaygii hore ee maqaalkaygu wuxuu sii socdaa (aan wali la xaqiijin) faallo [quote]
De Blije B. wuxuu ku yaallaa Switzerland, sidee ayay u noqon kartaa, ma aha? Fikraddooda hubaal ayaa sii kordhi doona ka dibna lagu eryi doonaa bangiyada kale, waxaan maleynayaa sidaas.
Haddii taasi aysan calaamad u ahayn derbiga? Sidaas darteed waxaa laguu arkaa bangiga ugu horeeya; waxay tilmaamayaan dhibcaha oo dhan oo laga yaabo in laga helo warbaahinta kale; waxay ururiyaan kuwan wareysiyo la leh Irma Schiffers; inaad bilawdo bangigaaga! Ronald iyo Irma iyo dhamaan kuwa kale ee warbaahinta kale waxay isku dayeen inay kuugu qanciyaan sheeko wanaagsan oo aad u macquulsan, taas oo dhammaan qodobbada la ogaan karo in qof kasta oo doonaya uu heli lahaa sanooyin badan. Waa jilicsanaan wanaagsan oo aad u wanaagsan. Laakiin wali waxay leedahay dhammaan urta heer sare ah oo ku wareegsan iyaga. Irma Schiffers ma weydiin su'aal muhiim ah 1 iyo dhamaan sheekooyinka Ronald Bernard waa mid aan la aqbali karin. Si kastaba ha ahaatee, warbaahinta kale oo dhan ayaa la wareegay oo waxay u adeegsadeen in ay ku xirxiraan warbaahinta kale iyada oo loo marayo barnaamijka Coöperatieve Vrije Media. Waxay ku tusinayaan adigoo u maraya (adoo abuuray AIVD) kaynta si ay u noqdaan goobo warbaahineed oo kale (iyaga oo aan dabcan ku tilmaamin Martin Vrijland).
Jahawareer iyo hadda?
Wanaag, mahadsanid la'aanta iyo maxaa hadda? Yaan ku kalsoonahay hada, maxaan wali akhriyi karaa ama maya. "Waxaanu ka soo qaadannaa musqusha musqusha, talo nuugida musqusha"Waxay noqon laheyd mid fudud, laakiin waxaan kugula talinayaa inaad akhriso maqaaladayda, gaar ahaan inaanan ka tagin" kaniisadda cusub "iyo" wasiirka kale ", laakiin si aad u ficiltaato macalinkaaga gaarka ah iyo naftaada. in lagu xiro. Haa, 'shaqaalaha iftiinka' ayaa kuu sheega sidoo kale, laakiin waxay rabaan inay ku hayaan shaxda Luciferian. Waxaan rajeynayaa inaad ka baxsan doonto. Sidaas darteed haddii warbaahinta iyo warbaahinta kale ay midab sawiraan, waa inaad aragto sawirka qarsoon ee sawirka. Waxay kaa dhigayaan sawir qarsoodi ah.
Dib ugu fiirso sawirka kore ee khadka cagaaran. Waxaad aragtaa qof kasta oo ka dibna dhibic oo u eg sida dhibcaha ay ku xiran tahay warbaahinta kale, laakiin marnaba marnaba marnaba arag. Waxay kaa ilaalinayaan wadarta guud ee calaamadeynta shaxda Luciferian. Inkasta oo ay kuu sheegi doonaan in caruurta ilbaabada lagu sameeyo lakabyada sare. Miyaad ku dhufatay dareenkeyga Ronald Bernard? Ama ma waxaad ka mid noqon lahayd xubin ka mid ah Kaniisadda Badbaadada ah? Ha iloobin warbaahinta bilaashka ah! Waxay dhab ahaantii u baahan yihiin taageeradaada!
Dhammaan goobahaas oo kale ay sameeyaan waxay waydiisanayaan deeqo si qarsoodi ah u haystaan ​​lacag. Tani waa istiraatiijiyad ula kac ah, si ay dabayshu uga soo baxdo shilalka, taas oo dhab ahaantii burburisay oo aan lahayn boqollaal cas. Yaa qaadi doona codsiyada Martin Vrijland ee taageerada dhabta ah haddii dhammaan shabakadaha internetka (oo ay maalgeliso AIVD) dhammaantood ay u muuqdaan kuwo ganaax ah? Xaqiiqdii ... iyo in ay ahayd sida dhabta ah.
Xoriyada hadalka ayaa si rasmi ah u jiri karta, laakiin waxaa si dhaqso ah loo burburin doonaa bulsho ahaan dhaqaale ahaan. Sidan waxaad sidoo kale dhaleeceyn kartaa dhaleeceyntaada. Sababtoo ah waxaan si buuxda ugu tiirsanahay deeqda sababtoo ah dhammaan aflagaadada iyo been-abuurka iyo weerarada internetka, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo inaad i taageerto. Tani runtii waa rafcaan culus (marka loo eego wicitaanada ka imaanaya goobaha mucaaradka ee gacanta ku haya oo dhan ee ku maydhaya raaxo).
Si aan u caddeeyo inaanan iibin booth, waxaad arki kartaa xaddiga deeqdani online-ka xidhiidhkan.
Su'aal wax walba! Naftaada u fikir. Ha ku dhicin "run ahaantii xaqiiqda" iyo midabaynta sawirka, si aadan u aragto sawirka dhabta ah iyo qarsoodiga ah.
Guud ahaan Wadarta: 1.424.606
Fikirka weyn: Waa maxay dunidan aan dhisi doonno ka dib qalalaasaha corona?
Stef Broekema op Coronavirus covid-19 iyo sayniska: Sidee buu jirkaaga u galayaa sideese ugu wareejiyaa?
Niels Rabius op Coronavirus covid-19 iyo sayniska: Sidee buu jirkaaga u galayaa sideese ugu wareejiyaa?